Posted by အင်ကြင်းသန့် at 12:57 PM
ကလေးလေးတယောက်က ရေးလာတဲ့ အကြိုက်လေးတွေဆိုတော့ ဖတ်ရတာ ပေါ့ပါး သွက်လက်ပြီး ရိုးစင်းလှပပြီး ချစ်စရာကောင်းနေတယ်...
ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာတွေကို အစွယ်အဆိပ်တွေ၊ အတုအပြိုင်တွေ ကင်းကင်းနဲ့ ရိုးရိုးစင်းစင်း ဖြတ်သန်းသွားနေရတာကို အကြိုက်ဆုံး ဆိုတဲ့အတိုင်း တသက်လုံး အခုလိုပဲ နေသွားနိုင်ပါစေ...
အမှတ်တရ ရေးပေးတာ ကျေးဇူး ဂျင်းလေး...း))
ဂစ်တာတီးပြီး ဆိုပြတတ်တဲ့ သီချင်းသံ
တို့တောင် ကြိုက်ချင်ချင်းP
"ပိကျိ ပိကျိ...." ရသလိုလုပ်တာကိုး
နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်ပါစေ၊
(ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေထက် ဂစ်တာတီးပြီး ဆိုပြတတ်တဲ့ သီချင်းသံကို ပိုကြိုက်တယ်။:)))
ဖဘမှာလည်း တနေ့တနေ့ သူ့ ဘယ်သူချစ်သလဲ မေးလိုက်ရတာ အမော....
ဟွန်းးးး အဲသလို ဘလိုင်းကြီး ဝင်ဆူသွားရတာကို ကြိုက်တယ်....
ပိကျိ ပိကျိ လုပ်မှတော့ ပိစိ ပိစိ လေးပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ကြိုက်ထားတာလေးတွေကလည်း ကြိုက်ချင်စရာတွေချည်းပဲ။
မက်ဆေ့ ခိုးခိုးရိုက်နေတာ ဘယ်သူ့ကိုလဲ...
ဖုန်းထဲမှာ ပကျိပကျိဘယ်သူနဲ့ ပြန်နေတာလဲ
ညအိပ်တဲ့ခါ ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုပြတာ ဘယ်သူလဲ...
ဟမ်.. ပြောတော့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ခုတော့ ပေါ်ပြီ။
လူကြီးတွေမသိအောင် သူက တိတ်တိတ်လေး လှုပ်ရှားနေတာကိုး..
အပေါ်က အစ်မချစ် တုတ်ကြီးကြီးနဲ့ ရိုက်လိုက်ပါဗျို့...
ရုံးသမားချင်းတူတူမို့ ဂျင်းဂျင်းကြိုက်တာ အကုန်ကြိုက်တယ်.....:P
ပိကျိပိကျိ ဆိုတော့ တွစ်တီ ဘာ့ဒ်လေး (tweedy bird) လေးပေါ့ ဂျင်းဂျင်း...
အပျော်အနေဖြင့် ဖတ်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ် ..
နေ နေ တဲ့ အနေအထား က ကလေး အရမ်း ဆန်နေ သလို ပဲ... ..
စိတ်ကူးရင် အရမ်း ဆန်နေသလိုပဲ ...
စိတ်ကူရင်ဘ၀ နဲ အကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်း နိုင် ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်...
စိတ်ကူးရင်ဘ၀ က တခါတခါ အကျည်းတန်တတ် တယ်....
@Anonymous>>> ဟုတ်ကဲ့....ကျွန်မရဲ့ဒီစာက အပျင်းပြေ အပျော်ဖတ်ဖို့ ရေးထားတာ မဟုတ်ပါ။ အဲဒီလိုစာတွေကို ဖတ်ချင်ရင်တော့ အဲဒီလိုစာတွေရှိတတ်တဲ့ ၀က်ဆိုဒ်မျိုးတွေကိုပဲသွားဖတ်ပါ။ ဒီစာက ကျွန်မရဲ့ ဘလော့ဂါအစ်မတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အစ်မ မသက်ဝေက နေ့စဉ်ဘ၀တွေထဲက မိမိကြိုက်နှစ်သစ်ရာလေးတွေကို ရေးပေးဖို့ တက်ဂ်လို့ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ချရေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်မရဲ့ အနေအထားက ကလေးဆန်ချင်ဆန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ စိတ်ထားကိုတော့ ဖြူဖြူစင်စင်ထားပါတယ်။ လူကြီးဆန်ချင်ယောင်ဆောင်နေကြပြီး တကယ့်တကယ်တန်းကျတော့ အတွင်းစိတ်ထားတွေက မဖြူစင် မရင့်ကျက် အဆွယ် အဆိပ်တွေနဲ့ လူတွေနဲ့စာရင်တော့ ကလေးဆန်ဆန်ဖြူစင်ရတာက သာပါတယ်။ အခုရေးထားသမျှက ကျွန်မရဲ့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့ အမှန်တကယ်ဘ၀တွေထဲက အကြောင်းအရာတစ်ချို့ပါ။ စိတ်ကူးယဉ်၍ ရေးထားခြင်း တစ်လုံးမှ မပါပါ။ Anonymous ရဲ့ အမြင်မှာ ကျွန်မဘ၀က အကျည်းတန်ချင်တန်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ကျွန်မရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတယ်။ Anonymous ရဲ့ ဘ၀လည်း လူကြီးဆန်ဆန်ရင့်ကျက်စွာနဲ့ ဘ၀လည်း ထာဝရ လှပနေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.....။ သြော်....တကယ့်တကယ် ရင့်ကျက်ပြည့်ဝတဲ့သူ အပြုသဘောဆောင်စွာ ဝေဖန်အကြံပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နာမည်လောက်တော့ ချန်ခဲ့ဖို့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခုမှရောက်တယ် ဂျင်းရေ။ နာမည်ပြောင်းခေါ်တော့မယ်ကွာ... ပိကျိဆိုပြီး :P
ညီမငယ် အင်ကြင်း ရေ
ညီမ အကြိုက်လေးတွေ ဖတ်ပြီး ရီသွားတယ် ညီမရယ်
ရေခဲရေအေးအေးနဲ့ကို တကိုယ်လုံး ရွှဲစိုသွားအောင် လောင်းလိုက်ပြီ..။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ဂျင်းရေ..။
အိပ်မက်လှလှလေး မက်တာကိုကော မကြိုက်ဖူးလားး))))
နောက်ကျမှ ကော်မန့် လာ ရေး ရတာကို ကြိုက်တယ်။
ဂျင်းဂျင်း နဲ့ အကြိုက်ချင်း တချို့ တူ နေတာကိုကြိုက်တယ်..
မတူ နေတာ တချို့ ကိုလည်း ကြိုက်တယ်..ဟဲဟဲ
နှစ်သစ်မှာ ကြိုက်တာတွေ ဆက်ကြိုက်စွာ လုပ်နိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ.
ဘလော့လိပ်စာလေး လည်း http://kiki-idiotlove.blogspot.com ဟု ပြန်ပြောင်းချိတ်ပေးစေလိုပါသည် . ( အရင်ဟာကြီး ပျောက်သွားပါကြောင်းးးး )း)).
အင်ကြင်း တစ်ယောက် တစ်နေ့ တာ အချိန်တွေကို အစွယ်အဆိပ်ကင်းကင်း အတုအပြိုင် ကင်းကင်း တွေနဲ့ရိုးရိုးစင်းစင်းလေး နေ့ စဉ်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...